Labo askari oo ka tirsan NISA oo caawa dil iyo dhaawac loogu geystay xaafadda Burdheere – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Labo askari oo ka tirsan NISA oo caawa dil iyo dhaawac loogu geystay xaafadda Burdheere
Wararka naga soo gaarayo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in koox hubeysan ay caawa salaadii cishaha kadib xaafadda Burdheere ee degmada Waaberi ku dileen askari ka tirsanaa ciidanka nabad-sugidda qaranka ee NISA, halka mid kalena ay dhaawaceen.
Askarigaan la dilay oo magaciisa lagu soo koobay Anas ayaa la sheegayaa in dhowr rasaas ay ka haleeshay qeybta kore ee jirkiisa, waxaana kooxaha dilka u geystay askarigaasi ay dhaawaceen askari kale oo la socday askarigii la dilay.
Askariga kale ee la dhaawacay oo isna magaciisa lagu sheegay Ibraahim Shigshigow ayaa markii dambe dhaawaciisa loola cararay xarumaha caafimaad ee ku yaalla magaalada Muqdisho.
Kooxihii dilka iyo dhaawaca u geystay labadaasi askari ayaa la sheegayaa inay islamarkiiba goobtaasi isaga baxsadeen, waxaana markii dambe halkaasi soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka oo halkaasi ka qaaday meydka iyo dhaawaca askarta la weeraray.
Illaa iyo hataan ma jirto cid loo soo qabtay ama sheegatay weerarkaasi caawa lagu qaaday labadaasi askari oo ka tirsanaa ciidanka NISA.
Si kastaba ha ahaatee, dilkaan ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeysay dilalka qorsheysan ay si xowli ah ugu soo bateen magaalada Muqdisho, iyadoona dhowr jeer hore ay magaalada uga dhaceen falal lidi ku ah ammaanka magaalada.